Nahoana isika no mandeha lamasinina? Train Travel no sasatra, azo ampiharina sy manolotra ny endrika ara-tsosialy fa fomba fitaterana fotsiny hafa tsy mifanaraka. Na izany aza, niara-manana fahasembanana dia mety ho sarotra amin'ny sasany. Tsy midika izany fa tsy afaka mankafy ny fahafinaretana ianao, anefa. Ity lahatsoratra ity dia manome fototra faritra sasany izay mila Diniho rehefa mieritreritra ny fiaran-dalamby nankany dia niara-manana fahasembanana any Eoropa dia tsy saina.
Fiaran-dalamby aiza no ataovy amin'ny Save-A-Train raha mandeha sembana ianao?
Special Traveling amin'ny fanompoana fahasembanana dia mety miovaova arakaraka ny faritra hafa, miankina amin'ny masontsivana marobe; ny fiara eo amin'ny fiaran-dalamby manokana, ny trano ao amin'ny isan-karazany stations manaraka ny lalanao, ary na ny politikan'ny mpitatitra anao momba ny fidirana.
Vakio ny tapakilao ary fantaro ny làlanao mandritra ny dia tsy maintsy sembana
Diniho tsara ny tapakilanao sy ny zotram-pitateranao raha vao azonao izany. Hahazoana antoka fa mahazo aina ianao sy ny politika sy fepetra mba tsy gaga ny amin'ny fijanonana kely isan-karazany (indrindra rehefa mandeha any ampitan-dranomasina).
Entana fanampiny rehefa mitety kilema
Mijanòna any amin'ny faritra azo idirana indrindra ny tanàna. Ity dia iray amin'ireo faritra sarotra indrindra amin'ny fikasana ny dia fitsangatsanganana an-dalamby rehefa mandeha miaraka amin'ny kilemaina. Mety ho efa nahita lehibe azon'ny trano fandraisam-bahiny, fa inona no hitanao ianao, na mandeha / hakodian'ny olona ny varavarana fidirana? Misy havoana sy ny tohatra rehetra toro-lalana? Ho tsy maintsy manakodiava ny rarivato? Misy toeram-pisakafoanana teo akaiky teo idirana? Zava-dehibe ny fikarohana manodidina ny trano fandraisam-bahiny. Azonao atao ny mampiasa Google Maps Street View mba hahazoana ny laika ny tany, dia mailaka ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fanontaniana.
Azonao atao ny manafatra ny tapakilan'ny fiarandalambinao amin'ireo Fiarandalamby haingana indrindra any Eoropa amin'ny Vonjeo-A-Train ny saika rehetra nirotsaka toerana ambony ao 3 minitra, ao amin'ny levitra fiaran-dalamby tapakila tahan'ny ary nesorina ny saram isalasalana famandrihana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana?, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)